ဓမ္မဒူတမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်း: တန်ဆောင်မုန်းလပြည့် စုပေါင်းဘုံကထိန် အလှူပွဲကြီး
နံနက် ၁၁း၀၀နာရီ...........မြတ်စွာဘုရားရှင်အားစုပေါင်းဆွမ်းတော်ကပ်လှူ ခြင်း
နံနက်၁၁း၃၀ နာရီ..............တရားနာဧည့်ပရိတ်သတ်များအား စားသောက်ဖွယ်များဖြင့်ကျွေးမွေးဧည့်ခံခြင်း
.............သံဃာတော်များထံမှ မေတ္တာပို့ ပရိတ်တရားတော်များနာယူခြင်း
.............သံဃာတော်များအား ကထိန်သင်္ကန်းများဖြင့် ကပ်လှူခြင်း
နေ့လည်၃း၀၀နာရီ ...........သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနားစတင်ကျင်းပခြင်း။
သက်ငယ်သူ၊လူငယ်မောင်မယ်များမှ မိမိတို့ထက် ဂုဏ်အားဖြင့်လည်းကောင်း၊
အသက်အရွယ်အားဖြင့်လည်းကာင်း ကြီးမြတ်သူတို့အား ရိုသေစွာ
............ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံ တိဠတု (၃)ကြိမ်ရွတ်ဆို ဘုရားကန်တော့၍အစီအစဉ်
နေရာ.............SAALBAU TSG-HALLE Fechenheim, Pfortenstraße 55
60386 Frankfurt am Main,Strasse Bahn 11 ကို Fechenheimဘက်
အလှူအတန်း နှင့်သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ အစီအစဉ်........
၂.)ကွယ်လွန်သူဦးညီညီထွန်း အားရည်စူး ၍ မမာမာအောင် ၊သမီးနှင်းမိုးလွင်
၊သားရဲလင်းဖြိုး မိသားစု ............... ဝက်အူဆီပြန်ဟင်း၊ကြက်ပဲပာင်း
၁.)ကိုထင်အောင်မြင့်+မအိ မိသားစု ............... ပီလောပီနံ ဆနွင်းမကင်း
၂.) ဦးလှစု+ဒေါ်စိုးစိုးသိန်းမိသားစု ................ကြက်ဥပူတင်း
၃.) ဦးလှ+ဒေါ်ခင်ထွေးမိသားစု ...............ခေါပြင်
၅.)ကိုမင်းမင်း (မွန်) မိသားစု ...............သစ်သီးစုံ
၁. ဦးကောဝိဒ ၅၀ ယူရို
၂. ဦးသုမန ၅၀ယူရို
၃. ကိုမင်းဦး+မပြုံးပြုံးနိုင် ၅၀ ယူရို
၄. ကိုကျော်စိန်ဝင်းမိသားစု ၅၀ ယူရို
၅. ကိုလှမြင့်စိုး ၁၀၀ ယူရို
၆. ကိုကျော်ဆွေညွှန့် ၅၀ ယူရို
၇. ကိုအောင်ပြည့်ဖြိုး ၅၀ ယူရို
၈. ဒေါ်ခင်မာလွင်မိသားစု ၅၀ယူရို
၉. ကိုဝင်းကိုမြတ် Sushi am Main ၅၀ယူရို
၁၁.ကိုမင်းမင်း (မွန်) မိသားစု ၂၀ယူရို
၁၃.မခင်သူဇာ၊သား မောင်ဝါဆို ၂၀ယူရို
သား မောင်ကောင်းဆက်ပိုင်အောင် ၂၀ ယူရို
Eingestellt von Dhammaduta Myanmar Buddhist Center Germany um 15:52